Another Popular Zanu PF Agent Tinashe Jonas Leave South Africa for Zimbabwe After 3 Years - Opera News
Another Popular Zanu PF Agent Tinashe Jonas Leave South Africa for Zimbabwe After 3 Years
By ZaHubNews (self media writer) | 4 months ago
The political class of Zimbabwe situated in South Africa are progressively tracking down their direction back home after the rising interest for the bringing home of these nationals by residents of South Africa.
You would review that previous this year, famous South African based, Zimbabwean conceived minister Mr Joshua Maponga passed on South Africa for Zimbabwe in a bid to stretch out his Pan-African mission to individuals residing in his nation of origin.
In a new turn of events, a video which was delivered by Gambakwe media today affirmed that Zanu PF specialist, Mr Tinashe Jonas is likewise leaving South Africa for Zimbabwe.
The youthful legislator who has lived in SA for more than three years said he is passing on South Africa to go get ready for the impending general political decision in Zimbabwe just as put resources into other business including media and cultivating.
He conceded that South Africa gave him the required popularity and he is returning to assist Zanu PF and President Emerson Mnangagwa with winning the official political decision come 2023.
He encouraged youthful Zimbabweans to unite behind president Emerson Mnangagwa on the grounds that he is changing lives through Zanu PF not at all like the resistance groups.
Emerson Mnangagwa Joshua Maponga Tinashe Jonas Zanu PF Zimbabwe